Somali News 06.22.21 | KWIT
Guddiga Beeraha ee Senate-ka Mareykanka ayaa fiirin doona arrimaha suuqyada lo'da Arbacada. U doodayaashu waxay yiraahdaan soo saarayaasha lo'du waxay wajahayaan waqtiyo adag suuqyada aan lahayn tartan ku filan. Afar ka mid ah kuwa sida weyn u cuna hilibka ayaa xukuma boqolkiiba 80 gawraca.
U.D ee ugu dambeysay Warbixinta dalagga waxay muujineysaa abaarta inay saameyn ku yeelaneyso dalagyada Iowa. Warbixinta ayaa muujineysa xaaladda hadhuudhka ee lagu qiimeeyay boqolkiiba 56 inay wanaagsan tahay heer sare; digirta ayaa lagu qiimeeyay boqolkiiba 57 wanaagsan ilaa heer sare. Labaduba waxay muujiyeen hoos u dhac ka yimid usbuucii hore.
Tirada kiisaska cusub ee COVID-19 ayaa kusii dhacay Nebraska. Gobolku hadda wuxuu leeyahay mid ka mid ah heerarka ugu hooseeya ee infekshannada cusub ee qaranka. Tirada ayaa dhacday sideed todobaad oo xiriir ah. Xarunta C.D.C. waxaa la diiwaan geliyey 168 kiis oo cusub usbuucii hore. Markii ugu sarreysay dayrtii la soo dhaafay, Nebraska waxay aragtay ku dhowaad 17,000 oo kiisas cusub dhammaadkii Nofeembar.
Maamulka degmada Monona ayaa isku dayaya inay aqoonsadaan meydka nin laga helay wabiga Missouri oo ku dhow Onawa, Iowa. Kalluumeysato ayaa daahfurtay meel u dhow aagga Maareynta Jasiiradda Ivy galabnimadii Axadda.
Somali News 06.21.21
By Halima Osman • Jun 22, 2021
Xaaladaha COVID-19 iyo isbitaalada la seexinayo ayaa wali ku sii dhacaya guud ahaan qeybo badan oo ka mid ah gobolka Iowa.
Waaxda Caafimaadka Dadweynaha ee Iowa kuma darin dhimashooyin cusub sababo la xiriira dhibaatooyinka jirada oo ay la socdaan ilaa 30 xaaladood oo cusub. Waxaa jiray 6,114 oo dhimasho ah mudadii uu cudurku socday. Ku dhowaad hal milyan iyo bar reer Iow ah ayaa si buuxda loo tallaalayaa.
Isbitaal dhigiddu waxay u dhacday 54 bukaan ah, taasi waa tan ugu hooseysa tan iyo dhammaadkii Maarso 2020.